11 months ago 1016 Qoodi
Sudaan bara kana baatii Adoolessa keessatti bishaan kiyubiik meetirii biiliyoona 5 (5 bil. m³) Abbayyaa gurraacharra akka argatte Koree Lolaa biyyattii beeksiseera. Korichi Sudaan bara darbe bishaan kiyubiik meetirii biiliyoona 7.8 akka argatte ibsuun, bishaanichi barana akka hir'ate beeksiseera.
Haata'u malee Itoophiyaa keessatti laga Takazee, yeroo Sudaan galu ammoo laga Atbaaraa jedhamu kiyubiik meetirii biiliyoona 4 yoo ta'u, kan bara darberraa walbira qabame yoo ilaalamu caalmaa kiyubiik meetirii biiliyoona 1.2 akka qabus eerameera.
Sudaan bishaan Abbayyaa gurraacha kan bara darberraa akka hir'ate ibsituus, Itoophiyaan garuu Masrii fi Sudaaniif Hidha Laga Abbayyaarra bishaan kiyubiik meetrii biiliyoona 37 waggaatti akka gadhiistu beeksisushee ni yaadatama.
Yeroo ammaa kanatti ol ta'iinsa bishaan Abbayyaa magaalaa guddittii biyyatti Kaartuum keessatti argamu meetira 15.72 yoo ta'u, kun yoo meetira 16.50 ta'e balaa lolaa akka uumamu ibsameera. Koreen Lolaa biyyattis lammiileen biyyattii hunda of eeggannoo akka taasisan waamicha dhiyesseera.
Hidha Haaromsaa Itoophiyaa Sudaan
Feb. 21, 2021, 9:13 a.m.
Sudaan ibsa Itoophiyaan baasteen hariiroo waliinii kan ganeefi arrabsoodha jette
May 31, 2020, 11:17 a.m.
Waldhabdee daangaa: Itoophiyaan 'daangaa ce’uun haleellaa taasifteef' Sudaan deebii gaafatte
May 21, 2020, 4:17 p.m.
Hidha Haaromsaa: Itoophiyaa fi Sudaan marii teeknikaa gaggeessuuf waliigalan - Gadaa Post
3 Obbo Lammaa Magarsaa tibbana VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniiru?
4 Dhaddacha: Obbo Jawaar Mohammad ogeessa fayyaa dhuunfaan yaalii akka argatan ajajame
9 Injinar Taakkalaa Uumaan aangoo akka gadhiisan murtaa'e
10 ODUU: Yaada murtoo manneen barnoota haala itti deebi'anii banaman irratti mari'atame